Doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug ee lagu waday inay maanta dhacdo oo dib loo dhigay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug ee lagu waday inay maanta dhacdo oo dib loo dhigay
Guddiga doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa shaaciyay in dib loo dhigay doorashada xilka madaxweynaha maamulkaasi oo lagu waday in maanta oo ay taariikhdu tahay 19-ka bishaan Febraayo lagu qabto magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Maxamed Saciid Xasan Geelle oo ah guddoomiyaha guddiga qaban-qaabada doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ee xilka ka qaaday madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in maanta oo aheyd inay doorashada madaxweyne dhacdo ay dib u dhacday illaa amar dambe.
Wuxuu guddoomiye Geelle sheegay in markii ay dib u fiiriyeen daruufaha siyaasadeed ee haatan ka taagan deegaanada Galmudug, aanay suurto-gal noqon karin in doorashada lagu qabto xilliga lagu ballansanaa oo ay maanta ku beegnayd.
Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ee dhawaan xilka ka qaaday madaxweynaha maamulkaasi C/kariin Xuseen Guuleed ayaa dhowr jeer hore shaaciyay inay qaban doonaan doorashada madaxweynaha cusub ee uu yeelanaayo maamulkaas.
Illaa iyo haatan lama oga xilliga rasmiga ah ee la qaban doonno doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug, wuxuuna guddoomiye Geelle ka gaabsaday inuu shaaciyo xilliga dambe ee la qaban doonno doorashada.
Siyaasadda maamulka Galmudug ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ahayd mid aad u kacsan, tan iyo markii qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ay xil ka qaadis ku sameeyeen madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed.
Madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed oo ka hadlay xil ka qaadista lagu sameeyay ayaa ku tilmaamay mid aan sharci ahayn islamarkaana ay soo abaabuleen kooxo doonaya inay xiisad siyaasadeed ka dhex abuuraan maamulka Galmudug.